Liverpool oo arkatay bedelka xidiga wadanka Holland Wijnaldum.
Home Horyaalka Ingiriiska Liverpool oo arkatay bedelka xidiga wadanka Holland Wijnaldum.
Liverpool ayaa isku diyaarineysa dalab ku aadan bedelka Wijnaldum kaas oo waqtigiisa ku eg dhamaadka xilli ciyaareedka iyaga oo suuqa ka baadi goobayaan bedelka xidiga wadanka holland sida ay ku warameyso Kicker.
Liverpool ayaa sii kordheysa dareemeysa inay lumin karaan Georginio Wijnaldum xagaagan iyadoo wadahadalada qandaraaska ay u diyaar garoobayaan inay u tartamaan ciyaaryahanka khadka dhexe Florian Neuhaus inuu bedelo hadii uu huleelo.
Neuhaus oo 23 jir ah waxaa lagu qiimeeyaa lacag dhan € 40 milyan ($ 48.5m) oo lagu sii daayo qandaraaskiisa Borussia Monchengladbach Warbixinta ayaa sheegeysa inuu sidoo kale xiiso ka helayo kooxaha Bayern Munich, Manchester City iyo Juventus.
Previous articleKooxda chelsea oo soo tiigsatay booska afaraad kadib guushii xalay.
Next articleDevid Liuz oo ka cabsi qaba in aan loo kordhin doonin qandaraaska kooxdiisa.